Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: just died in violent (အလန့်တကြား သေသွားခြင်း)
just died in violent (အလန့်တကြား သေသွားခြင်း)
Form.Dispose() = Form never closed. It just died in violent. I should have know that.
Form.Close() event မှာ ထည့်ထားတဲ့ ကုတ်တွေ ဘာလို့ မ run ပါလိမ့် ဦးဏှောက်ခြောက်သွားတာ တကယ်တော့ Dispose() function ခေါ်မိထားတာကိုး။ ကိုယ့် Form က အလန့်တကြား သေသွားတော့ Form ပိတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားတဲ့ Event တောင် trigger မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့...။ အင်း.... ဒါ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အလန့်တကြား သေသွားတာပဲ...။
Posted by Ko Gyii at 11:12 PM
Labels: Close , Dispose , DotNet
How to make MKV file with Soft-coded subtitles
ကိန်းဂဏန်း ရွတ်ဖတ်ပုံ သရုပ်ပြ ဆော့ဝဲ